* Light Of Myanmar *: ဒီလိုဝေဖန်လိုက်ပါတယ် (၃)
Posted by * In Search of Truth * at 8:13 PM
Anyway....75% I agreed with two rual men because in terms of right leadership, able to think all perspectives, analytical, open strategy. I don't care who you are. We must co-operate even they are national enemy as strategic. Qualified and competence leader able to look different view not like routine ways followers. "Induviduals who have strong Proactive Personality (PAP) are constantly looking for what they see as better ways to do things and actively championing their ideas, even in the face of strong opposition from others"
စစ်အဏာရှင် ကျဆုံးဖို့ မဆို ဘယ်သူ့ မဆိုအားပေးပါတယ်။
လက်နက်နဲ့ တိုက်တဲ့သူကော၊ ပါးစပ်နဲ့ တိုက်တဲ့သူကော၊ ကလောင်နဲ့ တိုက်တဲ့သူကော။
စစ်အဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြောင့် လူတွေ အကျင့်စာရိတ္တပျက်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် အောက်ကျနောက်ကျ ဘဝနဲ့ အသက်ရှင်နေရတာ။
စစ်အာဏာရှင် ကျဆုံးဖို့ နိဂုန်းချုပ်ဖို့ ကျိုးပန်းနေသူ၊ နည်းလမ်းရှာသူ အားလုံးကို အားပေးပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် အသက်ရှည်အောင် လမ်းမှားပြ သွေးထိုးတဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့် လူတန်းစားမျိုးကို ရွံရှာ၊မုန်းတီးပါတယ်။
ခုဘလော့ပိုင်ရှင် ကိုဇော်မျိုးက ဒီမိုကရေစီအရေး ကျိုးပမ်းမှု့ မှန်သမျှ ဝေဖန်ရှုံ့ ချတာတွေပဲ ရေးလေးတော့ ဘယ်လို နည်းစနစ်မျိုးနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်မလဲ ပြောပါဦး။
မပြောခဲ့ ဘူးဆိုရင် ပြည်သူမုန်းတဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့် မီးစာထိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင် လက်ဝေခံအနေနဲ့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
ဗမာပြည်ကို စစ်မိစ္ဆာလက်အောက် ကျွန်သက်ရှည်ချင်ရင် ဒီဘလော့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။
အမေရိကန် တွေ ဗြိတိန် နိုင်ငံတွေ နဲ့ နှိုင်းပြီးလျှောက်မပြောပါနဲ့ ခင်ဗျား..
ဘယ်အရာမဆို မဲဆန္ဒနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သူတောင်းစားကအစ ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်။
မကြိုက်ရင် မဲမပေးပဲ ဖြုတ်ချနိုင်ပါတယ်။
ဲပြစ်မှု့ ကျူးလွန်ရင် တရားဝင် သမ္မတရော၊ ဝန်ကြီချုပ်ရော ခုံရုံးတင်တရားစွဲလို့ရပါတယ်။
တရားဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။
“““လူတွေ နအဖကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြလာမယ့် အရေးကိုပဲ ထိုင်စောင့်နေကျတာပါ။ အဲလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ လက်ခုပ်တီးအားပေးမယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ နအဖအတင်း ထိုင်တုတ်မယ်။ ဒါပါပဲ။”””
ဲပြည်သူတွေ ဒါပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိအသက်အန္တရာယ်နဲ့ မိမိ မိသားစုလုံးခြုံရေးအတွက် ဒါပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားလိုတော့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဒါတွေရင်းပြီး လှုပ်ရှားရဲတဲ့မျိုးချစ်ဗမာလူမျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်ဘဲ(ကိုယ်ကျိုးအတွက်) ဝေဖန်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်လိုစိတ်မရှိကြပါဘူး။
တိုင်းပြည်ဖျက်နေတာ နအဖ ပါ NLD မပာုတ်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူတိုင်း သိပါတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကြုံတဲ့လူကို တိုးတိုးလေးမေးကြည့်ပါ။
နအဖ ကိုရှုံချတဲ့ ဘလော့ ထောင်သောင်းများစွာရှိတာ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ပြည်သူတွေကိုတိုင် ရှုံချနိုင်ခွင့်ရှိလို့ ရှုံချလိုစိတ်ရှိလို့ ဒီလောက်များလာတာပါ။ နောက်ထပ် သိန်းသန်း ပေါင်းများစွာ ထပ်ထွက်လာပါဦးမယ်။ ပြည်သူတွေ လုပ်နိုင်တာဒါပဲ..အန္တရာယ်ရှိရင်တိုးတိုးပြောမယ်။ မရှိရင်ကျယ်ကျယ် ပြောမယ်။
More or less I agree you.But your article isalittle too far.As you know Myanmar people are influence by system.We are destroying by the system.So don't blame on our people.
Anyway thanks for uncovered the truth.Next time write about the stratey of idea for changing the government.
နေ၀င်ရာရာနောက်ကိုတကောက်ကောက်လျှောက်လိုက်နေရင်တော ဘယ်တော့မှ နေထွက်တာကိုမြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ Your brain is not opened as you said. As for me i support all the peaceful movements by pro-democractics . It may take long but we have to be patient for the sake of real democractic country.
သို့ ကို Ah
ဒီဘလော့ဟာ အဆင့်အတန်းမဲ့ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို လက်မခံပါ။ အခုအစ်ကိုရဲ့စာကို ဖျက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ
အစ်ကိုက ဘယ်လို နအဖ ဆန့်ကျင်ရေးကို ထောက်ခံသလဲခင်ဗျာ? အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ မပေါ်သေးမီက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၈၈၈၈ လူထုအုံကြွမှုမှာ ပြည်သူတွေ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ပြီးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ မနေ့က ဆန္ဒပြပွဲ မှာ သောက်သောက်လဲ အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီတော့ အစ်ကိုတို့ လုပ်နေတာ နအဖ ပြုတ်ကျရေးလား သက်ဆိုးရှည်ရေးလားဆိုတာ ဒီမှာ အဖြေပေါ်နေပါပြီခင်ဗျာ။
သို့ အစ်မ naturelover
NLD ဆိုတာ စံနစ်ဆိုးကိုတိုက်ဖျက်နေတဲ့ အဖွဲ့ပါ။ (ဒီမိုကရေစီကို စံနစ်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုချင်း မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအနေနဲ့သာ ပြောကြားချင်းဖြစ်ပါတယ်) အဲဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင် စံနစ်ဆိုးရဲ့ အရိပ်အောက်မှာဖြစ်နေရင် NLD ဟာ ပြည်သူတွေကို ကယ်ဖို့ နေနေသာသာ သူ့ဖာသာသူ့တောင် ကောင်းကောင်း မတ်တပ်ရပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောပဲဗျ။
သို့ အစ်ကို top
အစ်ကို သိတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ အင်္ဂလန်တို့လို ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင် ပြုတ်ကျတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အချင်းချင်း အဆင်မပြေလို့ အဖြုတ်ခံရတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူသတ်လို့ ဘာမှမဖြစ်တာ 9/11 နဲ့ 7/7 က သက်သေထူနေပါတယ်။ အားရင် ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ http://lightofmyanmar.blogspot.com/2007/08/93_17.html
တိုင်းပြည်ဖျက်တာ နအဖလည်းပါတယ်၊ NLD လည်းပါတယ်၊ သတင်းဌာနတွေလည်း ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ အစ်ကိုတို့ အဖွဲ့တွေ အကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ မကြာမီမှာတော့ သတင်းဌာနတွေ ဘယ်လို လုပ်လဲဆိုတာ တင်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာလည်း မြင်ယောင်ပါတယ်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ တိုင်းပြည်မျက်နှာကို မထောက်ပဲ သတင်းဌာနတွေဘက်ကနေ လိုက်ပြီးကာနေမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။
ကျနော်ပြောထားတဲ့ နအဖကို အတင်းတုတ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။ အစ်ကိုတို့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဘလော့တွေကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ လုပ်တတ်တာ နအဖ အတင်းတုတ်တာပဲ မဟုတ်လား? အစ်ကိုတို့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ တွေ ချမှတ်ထားတဲ့ နအဖ ပြုတ်ကျရေးလမ်းစဉ်ပြောပြပါ။ တိကျတဲ့ လမ်းစဉ်မရှိပါ။ အောက်ခံဘောင်းဘီလေး ဝေတာနဲ့ အောက်တန်းစားတွေလို လိုက်ဆဲနေတာဟာ နအဖပြုတ်ကျဖို့အကြောင်းမရှိပါခင်ဗျာ။ ရေနံကုမဏီ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်အောင်လုပ်တာ နအဖထက် ပြည်သူတွေ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာ အစ်ကိုတို့ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်ရှိတယ်လို့ မထင်ပါခင်ဗျာ။
နအဖကို ပြည်သူတွေ မုံန်းတာလက်ခံပါတယ်။ အဓိက ကိစ္စကတော့ နအဖ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းလို့ပါ။ အဲဒါနဲ့ နအဖက ဒီမိုကရေစီထက်ပို ရက်စက်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါ။
ကျနော်တို့မှာ ၀ါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စွဲလမ်းမှု မရှိပါခင်ဗျာ။ နိုင်ငံရေးဝါဒဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ မသုံးရသေးခင် ကြော်ငြာကြည့်လို့ကတော့ အရမ်းကို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့သုံးမှ အပြစ်အနာဆာတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ နအဖကို မမုံန်းပါဘူး၊ စစ်တပ်ကိုလဲ မမုံန်းပါဘူး။ နှစ် ၂၀ လုံးလုံး ပြည်သူတွေ ထမင်းလေးတလုပ်ကို ၀၀လင်လင်စားနိုင်အောင် လုပ်နုိူင်တဲ့ အရည်အချင်းလေးတောင် မရှိတဲ့ အစိုးရပါ။ ဒါကြောင့်နအဖ ဆင်းသင့်ပြီလို့ ထင်မြင်ပါတယ်။ ပြုတ်ကျရေးအတွက်လည်း တတ်စွမ်းတရွေ့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ( အခုလည်း အစီအစဉ် လေးတချို့ကို တင်ပြဖို့လည်းရှိပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးတွေ အားလုံးဟာ အဲဒီအစီအစဉ်တင်ပြတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ လည်းရည်ရွယ်ရေးသားတာတွေ ပါနေပါတယ်။ ) ကျနော်တို့ အရင်တင်ပြခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တုံးကလည်း အသေးစိပ်မေးမြန်းတာတွေ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ မေးတဲ့သူတိုင်းလည်း နှစ်သက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီသမားတွေက အကြောင်းအရာပေါ်မှာ စဉ်းစားမှု မလုပ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကျနော်တို့ အစီအစဉ်ကို မကူညီခဲ့ကျချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အမြင်ကို အမြဲတမ်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ မြန်မာအရေးနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဟန်ဆောင်တာတွေ မပါပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အစ်ကိုဟာ ဒီဆောင်းပါးတွေရဲ့ အရေးပါပုံကို မသိတာပဲလား ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာပဲလား ဆိုတာ အစ်ကိုပဲ အသိဆုံးနေမှာပါ။ အစ်ကိုတို့ နအဖ အပြုတ်တိုက်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင်လဲ အင်အားရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုတိုင်က အင်အားမရှိပဲ နအဖပြုတ်ကျအောင် လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မလား? သေချာစဉ်းစားပါခင်ဗျာ
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ကို နအဖပြုတ်ကျရေးလမ်းစဉ်ဘာလဲလို့ လာမေးနေတာ ရယ်စရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါဟာ အစ်ကိုတို့ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို မေးရမယ့် မေးခွန်းပါ။ အဲဒါဟာ သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ပါခင်ဗျာ။ သူတို့ဟာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ရေဒီယိုပေါ်မျာ ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ပြောနေတာကလွဲလို့ ဘာမှ အဖြစ်မရှိပါ။ အဲဒီလူတွေ အမှန်တကယ် အရည်အချင်းရှိရင် နအဖပြုတ်ကျရေးလမ်းစဉ်ကို ချမှတ်နိုင်ရပါမယ်။ ဒီတော့ နှစ် ၂၀ကြာလို့တောင် လမ်းစဉ်မစွဲနိုင်တဲ့ အဖွဲ့တွေကို အရင်သွားမေးလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ။
ကျနော်က နိုင်ငံခြားသားတွေကို မျက်ကန်းအထင်ကြီးပြီး မြန်မာတွေကို အထင်သေးနေတဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ Racist ဟုတ်မဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာကို အရင် လေ့လာလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ
may bearacist လို့ ပြောတာက color term သုံးတာ၇ယ်။ လူမျိုးခြားနဲ့ ယူတာမှားတယ်လို့ (စကားလုံးအတိအကျအဟုတ်ပေမဲ့) အယူအဆရှိနေတာသိသာနေလို့ ပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။စိတ်မဆိုးကြေးလေ။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အပွန်းခံပြီး ချိုသွေးပေးတဲ့ ဦးဦးရေ . . .
ဦးဦးလိုတော့ အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးချက်တွေ ရေးဖို့ အခြေအနေ မရှိပါ.. ၀င်ကူထောက်ပြရုံပါ..
အခြေအနေမဲ့ ထင်ရာစိုင်းသူတွေရှိနေသ၍ .. ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကြိုက်တဲ့အစိုးရကို ဖြုတ်ချလိုက် မဲပေးလိုက်နဲ့လဲ တိုင်းပြည်ကောင်းမလာနိုင်ပါဘူး။ ပိုဆိုးသွားစရာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ သိက္ခာရှိရှိ နည်းလမ်းမှန်မှန် ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သူတွေ တိုင်းပြည်ကို ခပ်ညံ့ညံ့အစိုးရမျိုးလက်က ကယ်တင်ဖို့ တကယ်ကို လိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းရှိဖို့ ပညာတတ်ဖို့ ပြည်သူတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ ဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ကမှ ဘယ်အာဏာရှင်ကမှ တကယ် မလှုပ်ရှားခဲ့ပါဘူး။ ကျောသပ်ပေးပြီး မြှောက်ကာဆွကာနဲ့ သူ့ကိုမုန်းပြီး ကိုယ့်ကို ကိုးကွယ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲ အားသန်နေကြတာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အနေမြင့်အောင် အရင်ကြိုးစားကြရမှာပါ.. ဒါမှ လမ်းမှန်ရွေးပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် လျှောက်နိုင်မှာပါ။
ပြည်သူတွေရဲ့ ၀မ်းနည်းအားငယ်မှုတွေကို ဒေါသအဖြစ်ပြောင်းပြီး opponent ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို တိုက်ခိုက်တာ ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး၊
အခုလှုပ်ရှားမှုဟာ ပြည်သူ-အစိုးရ နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ ပျော့ကွက် အားနည်းချက်တွေကို အသုံးချပြီး နေရာယူသလို ဖြစ်နေတာမို့ အားမပေးချင်သူတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ရှောင်သူတို့ကို တစ်မျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တော့ တစ်အားလျော့ပြန်ပါတယ်။
အားသာချက်လို့ ဆိုရအောင် ဘာအကျိုးရှိတဲ့ အကြံဥာဏ် လမ်းညွှန်မှုကိုမှ မပေးခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့စေတဲ့ စေတနာမျိုးကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ?
သူတို့ဘ၀ နိမ့်ကျလေ အစိုးရကို မုန်းလေ ငါတို့အကျိုးရှိလေ ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်ကြီးကပဲ တခြားရပ်တည်ချက်တွေထက် နေရာယူနေတယ်လို့ မြင်တယ်။
နိမ့်ကျနေတဲ့ ဘ၀တွေကို ငါတို့ နေရာရမှ မြှင့်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အမုန်းအားပေး စိတ်ထားတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို မြှင့်တင်လို့ မရပါဘူး။ . .
ဒါတွေကို သိနားလည်သူတွေက လွတ်ရာကျွတ်ရာမှာ မသိသလိုနေတာကတော့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကို တွယ်တာပြီး မျိုးနွယ်အပေါ် social-irresponsiblity တာဝန်မဲ့မှုပါ.
အတင်းတိုက်တွန်းတန်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုနေတာကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာ အနေမှန်ပြီး ငြိမ်းငြိမ်းနေလဲ ပတ်ဝန်းကျင်မသာယာတာကို လစ်လျှူရှုတာ ကိုယ့်ဘ၀အတွက်ရော ၀န်းကျင်အတွက်ပါ မကောင်းပါဘူး..
ဒါကြောင့် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ဒီလို အားဖြည့်ပေးတာကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မသိတတ်သူတွေကတော့ ဒီလိုဟိုလိုလုပ်တာ နည်းလမ်းမကျဘူးပြောရင် ပြင်ရကောင်းမှန်းမသိ နာချင်အော်ချင်နေတုန်းပါပဲ၊
ဒါတွေကို ဥပေက္ခာပြု ဒီလူတွေအပေါ် ဂရုဏာထားပြီး ဥာဉ်ဆိုးအတော်များများ လွှမ်းမိုးခံရသူတွေကို ချေချွတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ဇာတိသံယောဇဉ်ကြီးသူတွေရဲ့ စေတနာကို ၀မ်းမြောက်စွာ လေးစားပါတယ်၊
အသုံးအနှုန်းတွေ ရင့်နေလဲ စာလုံးပေါင်းတွေ ချွတ်ယွင်းနေလဲ စေတနာမှန်အတိုင်း ခရီးဆက်နိုင်ပါစေ။
According to UN International Conventions, "the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, color, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life."  This definition does not make any difference between prosecutions based on ethnicity and race, in part because the distinction between the ethnicity and race remains debatable among anthropologists  According to British law, racial group means "any group of people who are defined by reference to their race, colour, nationality (including citizenship) or ethnic or national origin"
ဒါနဲ့ မသိလို့မေးပါရစေ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နအဖက ဘာလို့ဖမ်းထားတာလဲဟင်